एनअारएन अमेरिका क्षेत्रीय सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा ‘भिजन–२०२०’–सोनाम लामा – Everest Times News
एनअारएन अमेरिका क्षेत्रीय सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा ‘भिजन–२०२०’–सोनाम लामा
२०७४ जेष्ठ ४, बिहीबार १९:३७
त्यसो त अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको नेपाली डायसपोरा एजेन्डा विहिन हुनै सक्दैन । हजारौको संख्यामा नेपाली र सयांैको संख्यामा उनीहरुका संघसंस्था रहेको न्युयोर्कमा हरेक साता जस्तो नयाँ विषयको चर्चा हुन्छ र सेलाउछ । यस पटक अलि भिन्न विषयमा नेपाली डायसपोरा चलायमान भएको छ । न्युयोर्कमा रहेका नेपाली डायसपोराको आथित्यतामा विश्वभरीका नेपाली भेला हुदैछन । गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं क्षेत्रीय सम्मेलन न्युयोर्कको पारिपट्टि न्युजर्सीमा अगस्ट २७ र २८ मा हुदैछ ।
यो सम्मेलनकै कारण अहिले एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीहरुको दैनिकी नै परिवर्तन भएको छ । एनआरएन उत्तर अमेरिकाका क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामाले नै क्षेत्रीय सम्मेलन मुल आयोजक समितिको नेतृत्व गरेका छन् । न्युयोर्कमा व्यवसाय गर्दै आएका लामा एनआरएन अभियानमा सुरुदेखि नै लागेका व्यक्ति हुन । क्षेत्रीय सम्मेलनको तयारी, व्यवस्थापन, उद्देश्यलगायतका विषयमा लामासँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि बिष्णुहरि घिमिरेले गरको कुराकानीको संपादित अंश ।
पछिल्ला दिनहरु तपाई निकै व्यस्त देखिनुहुन्छ नि !
अहिले एनआरएनमा ६ वटा क्षेत्र छन् । विश्व सम्मेलन हरेक दुइ वर्षमा नेपालमा हुन्छ । क्षेत्रीय सम्मेलनमा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुन्छ, कार्यक्रमहरु के कसरी गइरहेका छन् भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ अब कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्नेमा छलफल हुन्छ । समग्र अपटेड हुन्छ । विजनेसको फोरम हुन्छ, नेपालमा कहाँकहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने योजना बन्छन् । अहिले सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा ‘भिजन–२०२०’ भन्ने छ । यसैका बारेमा छलफल हुन्छ ।
यो भिजन २०२० भनेको चै के हो ?
स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म एउटै एजेन्डामा एनआरएन अगाडी बढ्यो । समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । जहिले पनि चन्दा उठाउने मात्र भएको छ । अब एनआरएनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा छ । पहिला नेपालमा लगानी भन्ने मात्र थियो, अब नेपालबाहिर बसेकाहरुलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने भन्ने पनि हो । अमेरिकाकै कुरा गरौ यहाँ तीन लाखको हाराहरीमा नेपाली छन् । धेरै युथ छन उनीहरुलाई कसरी नेपालसँग सम्पर्कमा राख्ने भन्ने योजना ल्याउनु पर्ने भएको छ । अब एनआरएनका कार्यक्रमलाई कसरी नयाँ ढंगले अगाडी लैजाने भन्ने कुरामा छलफल हुन्छ । यो सम्मेलनले सन् २०२० सम्मका लागि योजना बनाउने छ ।
एनआरएनले स्थापना काल देखि नेपालमा लगानीको बातावरण चाहियो, दोहोरो नागरिकता चाहियो भनेर लाग्यो अब नेपालबाहिर रहेका दोस्रो पुस्ताका नेपालीका लागि पनि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने हो । त्यसबाट धेरै कुरा आउछ, अब एनआरएन भनेको एउटा संस्था हो, अब सदैव चन्दा मात्र उठाएर हुदैन, अब त ७४ मुलुकमा एनआरएन पुगिसक्यो, अब ठूला कम्पनीसँग सम्पर्क बढाउन प¥यो, राम्रो प्रायोजक पाउन सक्छौ, अहिले हामीले एउटा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दा सबै सँग चन्दा माग्नु परेको छ । अब आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, सबैलाई कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ ।
यो सम्मेलनमा कति जनाले भाग लिन्छ र तिनको व्यवस्थापन कसरी हुदैछ ?
भिसाको पनि कुरा छ । भिसा प्रक्रियामा समस्या आएन भने दुइ सयभन्दा बढी मान्छे आउछन, अमेरिकाको विभिन्न राज्यबाट गरी तीन सयको हराहारीमा सहभागी हुन्छन भन्ने छ । त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ । बाहिरबाट आउनेहरुका लागि प्याकेजमा होटल रुम मिलाएका छौ, एनआरएनको वेबसाइडबाट नै आफैले बुक गर्नु पर्ने हुन्छ । अमेरिका भन्दा बाहिरबाट आउनेहरुका लागि हामीले दुइ सय अमेरिकन डलर दर्ता शुल्क तोकेका छौ । त्यो भित्र, ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर र रुम सबै प्याकेजमै आउछ । दुइ दिनको लागि । अमेरिका भित्रका लागि एक सय डलर तोकेका थियौ, तर त्यो धेरै महँगो भयो भन्ने गुनासा आए पछि, अमेरिका भित्रका लागि हामीले दुइथरी दर्ता शुल्कको व्यवस्था गरेका छौ, प्याकेजमै खाना खाने लाई एक सय र कार्यक्रममा भाग मात्र लिनेहरुका लागि चालिस डलर शुल्क तोकेका छौ । चालिस डलर तिर्नेले पनि साँझको सास्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन पाउछन् ।
अनुमानित खर्च ५० देखि ६० हजार डलर हो । होटलमा तीन सय जना ग्यारेन्टी गरेका छौ, मान्छे नआए त्यो हामीले तिर्नु पर्छ । इन्भेन्ट पाटनर पाएका छौ, पुरा मान्छे आए भने हामीलाई कुनै समस्या हुदैन । हामी सँग पैसा वचत हुन्छ । त्यो पैसा हामी एनआरएन हेडक्वाटरमा पठाउछौ ।
अब अमेरिका भित्रकै कुरा गरौ, अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआरएन अभियानमा तपाइ सुरु देखिनै हुनुहुन्छ । अहिले त क्षेत्रीय संयोजक, यसै कुराकानीमा तपाइले नै भन्नुभयो अमेरिकामा तीन लाख नेपाली छन् भनेर तर एनआरएनको सदस्य त दश हजारले मात्र लिएका छन् । फेरी हरेक निर्वाचन विवादमा पर्दै आएका छन् ।
विवाद त अब कसैको इगो हुन भएन, एनआरएन गैर राजनीतिक र नाफा नकमाउने संस्था हो । त्यसै अनुसार जानु पर्ने हो, एउटा हार्दै जाँदा र अर्को जित्दै जाँदा हार्नेले आरोप लगाउने विरोध गर्ने काम चै भइरहेको छ । यो संस्था राम्रो हो । सबै भन्दा फाइदा त अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई नै भएको छ । पहिले विदेशको पासपोर्ट लिनसाथ नेपालको सबै त्याग्न पर्ने भन्ने थियो । अहिले त राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार छ गैर आवासीय नेपालीलाई पनि । यहाँका तीन लाख नेपालीले पनि अब बुझ्नु पर्ने भएको छ ।
अमेरिकामा अध्ययन गरेर विभिन्न उच्च पदमा काम गरेका, विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञको रुपमा पनि नेपालीले काम गर्न थालेका छन् । विषेश गरी ठूलो संख्यामा युवा जमात अझै एनआरएन मुभमेन्टबाट बाहिर छ त्यहाँ चै तपाइहरु कहिलेसम्म पुग्नु हुन्छ ?
सबै भन्दा सुरुमा पाँच सय थियो सदस्य, त्यस पछि २७ सय भयो, अहिले दश हजार भएको छ, अब झन बढ्छ, अब एनआरएनको महत्व के हो भन्ने कुरा यो सम्मेलन पछि झनै बुझ्नु हुने छ । त्यस पछि एनआरएन झन् अगाडी बढ्ने छ । नेपालबाट संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष पनि आउद हुनुहुन्छ उहाँले पनि एनआरएनको भुमिका बुझाउनु हुने छ । एनआरएनले काम गरेको छ भन्ने सबैलाई पर्ने छ ।
एनआरएन अमेरिकामा धेरै विवाद हुन्छ त्यसमा हामी किन पर्ने भनेर बाहिर बस्ने पनि छन नी ?
विवादको कुरा आइनै रहन्छ, मैले विभिन्न समयमा भन्ने गरेको पनि छु । एनआरएनमा लागेर यो यो फाइदा छ भनेर तर म एउटाले भनेर मात्र हुने कुरा होइन, अब सदस्य बनाउँदा स्टेट स्टेटमा गएर टाउन हाउसमा बैठक राखेर एनआरएनको महत्वबारेमा बुझाउनु पर्ने छ, पहिलो जस्तो भएन अहिले त विभिन्न स्टेटमा च्याप्टर पनि छ । च्याप्टरहरुले पनि कार्यक्रम राख्नु पर्छ, मिडियाले पनि सहयोग गर्नु छ । कतिपय ठाँउमा एनआरएन किन चाहियो हामीहरुको आआफ्नै राजनीतिक वा जातीय, क्षेत्रीय संगठन छ नी भन्नेहरु पनि छन उनीहरुलाई पनि आफ्नो सस्था र एनआरएनमा के के फरक छ भनेर बुझाउनु पर्छ । अब आफ्नो मातृभुमिको लागि केही गर्न पर्छ भन्नेका लागि एनआरएन एउटा प्लेटफर्म पनि हो, होइन म अब अमेरिकाको नागरकि भइसके मलाइ नेपालको के मतलव भन्नेहरुलाई जति सम्झाए पनि आउदैनन् । त्यो आफ्नो विचार र सोचाइमा पनि फरक पर्ने कुरा हो, नेपालमा हेरौ न विभिन्न एनजिओ आइएनजियो छन् । रेडक्रस छ तर पनि एनआरएनले भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा काम शुरु गर्ने अनुमति पाइसकेको छ त्यो किन भयो भने एनआरएन माथिको विश्वास हो नी ।
अन्तमा सम्मेलन सफल पार्न अरु के के गर्नु भएको छ ?
सबै जना लागेका छौ, फिडब्याक राम्रो आएको छ । एनआरएन के हो भनेर बुझ्नका लागि हलमा आउनु भयो भने झन धेरै बुझ्न सक्नु हुन्छ । विश्वभरीका नेपाली आउदै हुनुहुन्छ । नेपालका तीन जना बिलिनियरहरु उपेन्द्र महतो, विनोद चौधरी र हाम्रो आफ्नै अध्यक्ष शेष घले पनि आउनु हुने छ । उहाँहरुले व्यापारको बारेमा प्रष्ट पार्नु हुने छ ।
6 कोरोना भाइरस र कविता : नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा